Faah-faahinta Kulamadi Sabtidi Dhacay ee Horyaalka Ingiriiska
Kadib markii Jimcihi lasoo dhaafay si rasmi ah loo furay horyaalka Ingiriiska ee xilli ciyaareedkan 2017-18, ayey kooxaha intooda badani Sabtidi ciyaareen.
Kooxda difaacaneysa horyaalnimada ee Chelsea ayaa ku bilaabatay guuldaro qaraar, ka dib marki ay garoonkeeda Stamford Bridge ee magaalada London ku garaacday naadiga yar ee Burnley oo dirtay 3-2.
Burnley qeybti hore ee ciyaarta ayey iska boobsiisay Chelsea, waxaanalaba ka mid ah goolasha u dhaliyey Sam Vokes halka goolka kalana uu saxiixay Stephen Ward . Chelsea oo inti ay ciyaarta socotay kaarka cas laga siiyey kabtankooda cusub Gary Cahill iyo Cesc Fabregas ayaa waxaa goolasha u kala dhaliyey Alvaro Morata oo ay dhawaan kasoo iibsatay kooxda Real Madrid iyo daafacooda David Luiz.
Ciyaaraha kalana, Liverpool ayaa iska khasaarisay guusheedi ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan ka gadaal marki daqiiqadi ugu danbeysay ay kooxda Watfrod bareejeysay, iyadoo goolkaasi oo ahaa mid muran dhaliyey uu keenay ciyaaryahan Miguel Britos.
Ciyaartan oo ku dhamaatay bar-barro 3-3 ah, ayaa waxaa Liverpool ay ku hogaamineysay 3-2, laga soo bilaabo daqiiqadii 57-aad ilaa laga soo gaaro daiqiiqadi 93-aad, goolasha waxaa Liverpool u kala dhaliyey Sadio Mane, Roberto Firmino iyo Mohamed Salah. Halka Watford ay goolasha u saxiixeen Stefano Okaka oo madaxa ku dhaliyey, Abdoulaye Doucoure iyo Miguel Britos.
Hadii kooxaha Chelsea iyo Liverpool la taakeeyey, waxaa si raaxa leh guusheedii koowaad ee horyaalka sanadkaan kusoo xareysatay kooxda Manchester City oo 2-0 ku khaarijisay kooxda dhawaan kusoo biirtay kooxaha heerka koowaad ee Brighton.
Inkasta oo ay Manchester City goolasha heleen dhamaadki ciyaarta, ma jirin wax khatar ah oo ay kala kulantay kooxdi kasoo horjeeday guud ahaan inti ay socotay ciyaarta. Labada gool ee ay ku badisay mid ka mid ah waxaa saxiixay Sergio Aguero oo dhaliyey daqiiqadii 70-aad, halka goolka labaadna uu ahaa mid uu kooxdiisa ka dhaliyey Lewis Dunk.
Ciyaarihi kale ee dhacayna, kooxaha waxay isku arkeen sidaan:
West Bromwich Albion 1 - 0 AFC Bournemouth.
Axada birrito ahna, kooxda Manchester United ayaa soo dhaweyn doonta West Ham United, halka Tottenham ay booqan doonto garoonka Newcastle United.